फेरि आकासिन थाल्यो कुखुराको मासुको मूल्य; प्रतिकिलो कति? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेरि आकासिन थाल्यो कुखुराको मासुको मूल्य; प्रतिकिलो कति?
पछिल्लो समय कुखुराको मासुको मूल्य बढ्दै गएको छ। बजारमा कुखुराको अभाव भएपछि मूल्य बढ्न थालेको हो। दशैंअघि प्रतिकिलो १ सय ९० देखि २ सयसम्म रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले २ सय ७० रूपैयाँ पुगेको छ।
बजारमा कुखुरा मासुको माग बढेपछि मूल्य बढ्दै गएको सिन्धुलीगढी कोल्ड स्टोर, बानियाँटारका मासु व्यापारी विष्णु कार्की बताउँछन्। ‘अब जाडो मौसम सुरू हुन थाल्यो। जाडोमा चल्ला बचाउन सकिँदैन। चल्लाको उत्पादन कम भएपछि कुखुराको अभाव हुन्छ। त्यसपछि मूल्य बढ्न थाल्छ,’ उनले भने।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनकाअनुसार दशैंको छैटौं दिन कुखुराको मूल्य २ सय ५५ थियो। त्यसपछि बढ्दै गएर २ सय ७० सम्म पुगेको छ। ‘घटस्थापनापछि किलोमा १०/१५ रूपैयाँ बढ्दै थियो। षष्ठीको दिन २ सय ५५ पुग्यो। त्यसपछि पुन घटबढ हुँदै अहिले फेरी बढेको छ,’उनले भने, ‘होटल पनि खुल्न थालेसँगै माग बढेको छ। अझै मूल्य बढ्न सक्छ।’
मूल्य बढेपनि सन्तोषजनकरूपमा नबढेको कुखरा पालक किसान राजन अधिकारीले बताए। ‘पहिलेको तुलनामा केही बढेको छ राम्रै हो तर त्यति सन्तोषजनक रूपमा बढेको चाहिँ होइन,’ उनले भने। किसानले चल्ला हाल्न नसक्दा कुखुराको अभाव भई मूल्य बढेको उनी बताउँछन्। कोरोना र लकडाउनको कारणले कुखुराले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘दशैंअघि हामीले हामीले प्रतिकेजी १ सय ५० पायौं, पहिले वर्षको तुलनामा पनि त्यसरी मूल्य घट्नु पर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘कोरोना र लकडाउनको कारण बजारमा मागको टुंगो नै भएन।’
चाडवाड आएसँगै माग बढेकाले मूल्य बढेको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलले बताए। तर कुखुराको मासुको मूल्य बढे पनि यही मूल्यमा किसानलाई भने फाइदा नहुने उनी बताउँछन्।
‘यो मूल्यले किसानलाई फाइदा छैन, घाटासम्म हुँदैन’ उनले भने। तिहारसम्म भने मूल्यमा सामान्य घटबढ मात्र हुने उनको भनाइ छ। दशैंअघि किसानले प्रतिकिलो १ सय २० देखि ५० रूपैयाँ पाएका थिए भने अहिले १ सय ९० रूपैयाँ पाएका छन्।